Windows7& Zawgyi Problem.. - Zomi Computer and Internet Association
Home / HOW TO / WINDOWS7/ Windows7& Zawgyi Problem..
Sianzun April 06, 2012 HOW TO, WINDOWS 7
အဓိကပြဿနာတက်တာတော့ window7နဲ့64 bits တွေကိုကိုင်တဲ့လူတွေမှာ
အဆင်မပြေတာတွေများပါတယ် ..တကယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိရင် အောက်ပါအတိုင်းလေးလုပ်လိုက်ပါ..ကဲစရအောင်ဗျာ..
တခါတလေ စက်ထဲမှာဇော်ဂျီတွေတင်တာများလို့ရှုပ်ကုန်ပြီး အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..အဲ့ဒီတော့ ပထမဆုံး ကျနော်ပေးချင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးက AlphaZawgyiRemover ဆိုတာလေးပါ...အဲ့ဒီကောင်လေးကို run လိုက်တာနဲ့စက်ထဲကဇော်ဂျီတွေကို ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်...ပြီးတာနဲ့စက်ကို restart ချပေးပါလိမ့်မယ်..
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဒီမှာပေးထားတဲ့Alpha zawgyi unicode font ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ...ပြီးတာနဲ့install လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်စက်ကို restart ချလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ...
ဒီလိုလုပ်ပြီးမှ မြင်ပဲမြင်ရပြီး စာရိုက်လို့ မရသေးဘူး ၊ taskbar မှာလည်း keyboard icon လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် software လေးထပ်ပေးပါမယ်
ယူပြီးသွားတာနဲ့rar ဖိုင်လေးကိုဖြည်လိုက်ရင် zawgyi folder လေးထွက်လာပါမယ်...ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင်setup ဆိုတာလေးကို run လိုက်ပါ... loading တို့install လုပ်တာတို့ မပြပဲ ခဏကြာတာနဲ့အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်း box လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့close ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့taskbar မှာ keyboard icon လေးပေါ်နေမှာပါ..စမ်းရိုက်ကြည့်ပါ ...မြန်မာစာ (ဇော်ဂျီ)ကို အဆင်ပြေစွာ ရိုက်လို့ ရတာ တွေ့ရပါမယ်..
နောက်ထပ်ပြောချင်တာလေးက IE9 ကို update လုပ်လိုက်ရင် gtalk မှာ အကွက်ထဲမှာ စာရိုက်ရင် မြင်ရပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် အကွက်လေးတွေပဲပေါ် ပြီး မြန်မာစာကို မမြင်ရတော့ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
အဲ့ဒီလိုဆိုရင်.. IE ရဲ့ Tools > Internet Options > Fonts မှာ Zawgyi-One ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ..
Source: IT Zomi
Zomi Computer and Internet Association 12:46 AM, April 06, 2012
Androidading khong Kawllai tawh zat theihnaaom nai hia leh?
Sianzun 2:13 AM, April 07, 2012
Android leh Iphone te ading om ta ong zon beh lai ning.